BEERAHA-BEERIDDA EE YOSHTA BEERASHADA: BEERITAANKA HABBOON IYO WAXYAABAHA GAARKA AH EE DARYEELKA - BERRY
Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelka beertaada
Xerooyinka xagaaga badani waxaad si fudud u heli kartaa lacagaha digaaga iyo gooseberries, laakiin koritaanka yoshty ma aha dhammaan kuwa beerta ku lug leh. Beeladan oo aan weli helin aqbalaad caalami ah, in kasta oo dadka la kulmay ay mar hore soo celiyeen faa'iidooyinka buuxa ee miro noocan oo kale ah. Yoshta ma aha oo keliya inay ku soo celiso haemoglobin ee daaweynta adag ee dhiig-yaraanta, laakiin sidoo kale waxay caadiyan ujirta caloosha iyo mindhicirada, sidoo kale waxay ka qayb qaadataa soo kabashada degdega ah ee hargabka, hypertension iyo dhibaatooyinka leh xididdada dhiigga (derbiyadooda xoojiya). Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado sida loo abuuro, daryeelka (iyo gaar ahaan, trim) yoshtay laga bilaabo gu'ga ilaa qabowga.
Taariikhda dhalashada yoshta
In muuqaalka, yoshta u eg a currant waaweyn ama miro yar oo madow, taas oo ka dhigaysa in ay u eg tahay labada nooc. Dhab ahaantii, tijaabooyin ku saabsan isgoyska dhirta ayaa sii socday in ka badan qarni aan lahayn wax natiijooyin halis ah: duurka u bloomed, laakiin iyagu ma siin midho. Waxa suurtagal ah in la helo natiijo togan oo keliya 70-kii sano ee qarnigii labaatanaad, marka koritaanka Jarmalka R. Bower uu soo saaro iskudhafkii ugu horeeyay.
"Magaciisa" wuxuu ka kooban yahay laba xaraf oo magaca Jarmalka loogu talagalay currants iyo saddex waraaqood oo loogu magac daray miro yar, taas oo ka dhalatay midoobey waxay bixisay ereyga Josta (yoshta). Waqtigaas oo kale, soo saaraha kale ee Jarmalka, H. Murawski, ayaa u mahadcelisey tijaabooyin badan, waxay sameeyeen saddex seddex beelood oo dheeri ah, oo ugu dambeyntii helay magacyada Jokhne, Moro iyo Jochemin. Mustaqbalka, dhammaan barta la soo bandhigay ayaa la helay iyadoo lagu mahadinayo dadaalka dalagga beeraha dalal kale, gaar ahaan, aqoonyahanka Ruushka. Dhammaan tijaabooyinka cusubi waxay ku kala duwan yihiin baaxadda baadiyaha ama midhaha berry, qaabka caleemaha, dhalidda iyo dhadhanka.
Waqtigan xaadirka ah, dhexdhexaad ah caan ah ee currants iyo gooseberries waa baadiyaha awood leh caleemo aan lahayn waxbarasho oo dherer ah 1.5 mitir. Marka la barbardhigo currant madow, laamaha yoshta waa kuwo daba dheeraada. Warshad Tani waxay samaysaa tiro yar oo caleemo xidid, sidaas darteed uma baahnid manjooyin xoog leh. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidada ugu weyn ee yoshta, taas oo si fiican u kala soocaan isla currant iyo miro yar, waa caabbinta sare ee cudurada ugu weyn ee "waalidiinta" iyo iska caabbinta miro fiican.
Ma taqaanaa? Qodobka Faytamiin C ee yoshte wax yar ayaa ka hooseeya currants, laakiin 2-4 jeer ka badan miro yar.
Sida loo doorto geedo yoshta marka aad iibsaneyso
Haddii aad go'aansato inaad yoshta ku samayso goobahaaga, marka ugu horeysa ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa shuruudaha lagu dooranayo geedo geedkaan.
Halkan waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo tiro ka mid ah sifooyinka soo socda:
Qofka yar yar ee la iibsaday, wuxuu si sahlan u heli karaa xidid meel cusub.
Nidaamka asaasiga ah ee dhirta waa in ay noqdaan kuwo xoog leh oo caafimaad qaba, iyo xididada naftooda - cusub iyo qoyan. Iyada oo xididdada qalalan iyo cimilada-dhufan, sapling wuxuu qaadan doonaa xidid, laakiin si tartiib ah u kori doono.
In seedling tayo sare leh, jilif ku on caleemaha iyo jirku noqon doonaa mid cidhiidhi ah oo cufan, iyo haddii ay mar hore u suurta gashay in la duubo, waxaa loola jeedaa in tijaabooyin gaar ah ayaa qoday waqti dheer ka hor iyo horay u maareeyay si ay u qalalaan.
Waa muhiim! Haddii aad jajabiso qayb yar oo jilif ah, waad ogaan kartaa haddii dhirta nool ee hore u qalajisay. Qeybta cagaaran waxay muujineysaa sida ay ugu haboonaan laheyd doorashadii la doortay, halka cagaarka ayaa tilmaamaya dhimashadiisa.
Marka aad iibsanayso seedling xilliga dayrta, caleemaha ku yaala laamaha waa in si taxadar leh looga saaraa iyada oo aan waxyeeleynin burooyinkeeda. Intaas ka hor, ka hor intaadan iibsanin, xididdada yoshta waa in lagu duuduubaa maro qoyan oo lagu riday bac caag ah.
Xulashada goobta iyo diyaarinta ciidda ee yoshtu
Beeraha Yoshta (labadaba guga iyo xilliga dayrta) waxaa lagu fulin karaa ujeedo kala duwan: helitaanka goosashada tayo sare leh ama qurxinta xagaaga xagaaga. Xaaladda dambe, tayada iyo farogelinta dalagga ayaa door weyn ku leh, sidaa darteed, duurka ayaa lagu beeray labadaba qorraxda iyo hooska, iyagoo dooranaya aagagga sareeya ama hooseeya ee dusha sare ee dhulka ama territoriga xagasha. Xaaladda marka shaqada ugu horreysa ee yoshta sii kordheysa tahay in la helo tiro badan oo ah nooca casiir leh iyo midhaha dhadhan fiican leh, waxaa fiican in la eego qorraxyada iyo bacriminta dhulalka dhulka. Diyaarinta goobta la doortay waa lagama maarmaanka oo keliya marka kalluunku uu sii korayo, oo dhulkuna asal ahaan kuma sifoobin bacriminta sare. Xaaladdan oo kale, ciidda waa la qodayaa oo bacriminta organic waxaa lagu dabaqayaa heerka 15 kg 1 m².
Geedo ku habboon geedo Yoshta ah
Isla marka aad iibsato yoshta sapling iyo diyaariso meel loogu talagalay, waxaa suurtagal ah in ay sii wadaan si toos ah beeritaanka dhirta ee dhulka. Si kastaba ha ahaatee, ka hor, waxaa lagama maarmaan ah mar kale si ay u baaraan geedo la iibsaday, si loo soo saaro laamaha la qalajiyey iyo xididdada dhintay.
Sida aan hore u soo sheegnay, yoshtu waxaa lagu beeray meel joogto ah oo ah koritaanka guga ama dayrta. Si arrintan loo sameeyo, marka hore qodo dalool leh qoto dheer oo ah 50-60 cm iyo width ah 50 cm (ka badan waa suurto gal, iyadoo ku xiran cabbirka nidaamka xidid seedling). Compost ama humus (baaldi nus ah), 100 g oo ah superphosphate iyo nus litir oo qoryo qoryo ah ayaa lagu daraa bacriminta. Dhammaan Bacrimintaan si wanaagsan ayaa loogu qasi karaa lakabka lakabka ee carrada, kaas oo marka dambe lagu buuxiyo daloolka 1/3 ee mugga. Qodobka xiga waa inuu ahaadaa lakabka lakabka ee carrada aan lahayn Bacriminta, taas oo lagu shubay baaldi biyo ah. Sida ugu dhakhsaha badan ee dareeraha gebi ahaanba la nuugo, sapling waxaa la dhigaa bartamihii godka, xididdadiisa waa la toosiyey, iyo godkii ayaa lagu daboolay dhulka, waxoogaa tamping ilaa dhulka. Ugu dambeyntii, carrada mar kale ayaa la waraabiyey oo la googooyey peat, cawska ama hay (optional). Heerka sare ee mulchka waa inuu ahaado ilaa 10 cm.
Waa muhiim! Wixii koritaanka ugu wanaagsan ee geedo isla markiiba ka dib markii laga beerto waxay yihiin la jarjarey, tegaayo laba ilaa saddex ku hari on biqil kasta.
Inta badan beerto waxay dhacdaa xilliga gu'ga, laakiin mararka qaar beerashada yoshta waxay ku habboon tahay dayrta. Ma jirto wax laga baqo, iyo geeddi-socodka oo dhan ayaa raacaya nidaamka kor ku xusan, iyada oo farqiga keliya ee in godadka geedo loo diyaariyo laba toddobaad ka hor intaan la beeri.
Dadka degaanka xagaaga ee doorta yoshtu si ay u beertaan goobahooda ayaa laga yaabo inay ogaadaan in ay aad u sahlan tahay in la daryeelo marka loo eego gooseberries, mana aha wax aad u adag in la daryeeli karo currants. Hawlaha ugu muhiimsan ee la sameeyo waxaa loo yareeyey si loo daboolo ciidda meel u dhow duurka, dhirta dhirta, waraabinta joogtada ah iyo bacarinta carrada iyo ilaalinta khasab ee geedaha cayayaanka iyo cudurrada. Taasi waa, dhab ahaan, daryeelka dhan ee yoshta.
Mulching ciid wuxuu abuuraa isu dheelitir joogta ah oo qoyaan iyo nafaqo ee carrada, taas oo kaa badbaadineysa baahida loo qabo in si joogta ah loo dabciyo ciidda hoosteeda. Doorka mulchka wuxuu ku habboon yahay qashinka khudradda ama humus, taas oo u baahan 1-2 baaldiyadood oo baadiyaha ah. Sidoo kale doorasho wanaagsan ayaa loo tixgeliyaa isticmaalka peat. Waxaa intaa dheer, mulching ciidda ka yar taajkii geedkii iyo aagga of jirkeeda ma aha oo kaliya abuuri nidaam nafaqo wanaagsan ee ciidda, laakiin sidoo kale xaddid uumi ah ee qoyaanka, iyo sidoo kale ka hortagga koritaanka caws.
Ma taqaanaa? Yoshta waxay ku kici kartaa meel hal sano ah illaa 20 sano, intaad ku raaxeysanaato miro fiican.
Mid ka mid ah shuruudaha ugu weyn ee yoshta sii kordhaya waa waraabin badan oo joogto ah ee geed. Maqnaanshaha qoyaanka ee carrada waxay keenaysaa dib u dhac ku yimaada koritaanka iyo horumarka dhirta, taasina waa sababta ay muhiim u tahay joogteynta qoyaanka ciidda agagaarka duurka, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Isticmaalka dareeraha waa in uu dhulka ku qoyaa dhererka lakab-qaabeynta, kaas oo ah 30-40 cm. Qiyaasta isticmaalka biyaha ee kiiskan wuxuu noqon doonaa 20-30 l halkii 1 m² (macnaheedu waa hal waraabka), iyo inta jeer ee waraabinta waxay ku xiran tahay qoyaanka qoyaanka ee ciidda, xaaladaha cimilada iyo joogitaanka / maqnaanshaha lakabka korontada ee dusha sare.
Intaa waxaa dheer, arrin muhiim ah oo arrintani waa wakhtiga samaynta dareeraha. Sidaas darteed, waxaa ugu wanaagsan in la cuno yoshta subixii hore ama isla markiiba ka dib qorraxda, biyaha ku shubaya sanduuqa horay loo sameeyey, qoto dheer oo ah 10-15 cm (inta badan waxay ku yaallaan fogaan ah 30-40 cm oo ka soo baxaya saqafka). Laga soo bilaabo dhinaca sare ee grooves waxay ka buuxsanyihiin lakabyada dhulka hoostiisa, 15 cm sare Haddii dhirta waxaa lagu waraabiyaa qorraxda qorraxda, dhammaan qoyaanka si dhakhso ah uumi.
Sida caadada u muujineyso, yoshta, koray oo kaliya sida naqshadeynta naqshadaynta muuqaalka, uma baahnid quudin dheeraad ah, laakiin haddii aad rabto inaad hesho goosashada qani ah oo dhadhan fiican leh, markaa arrintan waa in la siiyaa fiiro gaar ah. Markay ballaaran tahay, dhirta ayaa si fiican uga jawaabeysa bacrinta iyo sanadaha ugu horreeya waxaad u baahan doontaa 4-5 kiiloogaraam oo dabiiciga ah sanadkiiba. Intaa waxaa dheer, yoshta waxay u baahan tahay nafaqooyin kale: Potassium sulphate (20 g sanadkiiba 1 m²) iyo superphosphate (30-40 g halkii 1 m²). Bacriminta dabiiciga ah (oo la badhxo mullein cusub ayaa la isticmaali karaa) iyo superphosphate waxaa lagu dabaqaa ciidda xagaaga hore, iyo sulfate potassium lagu daraa ciidda dayrta.
Ma taqaanaa? Bacriminta macdanta waxaa si sahal ah loogu beddeli karaa shimbir shimbireed ama isku mid ah dooxada mullein oo ah saamiga 1:10 (oo lagu daboolay ciidda xagaaga hore) iyo weel nus litir ah oo qoryo qoryo ah xilliga dayrta.
Sida dhir kale oo badan, yoshta ayaa u nugul weerarka cayayaanka halista ah, inkastoo tani aysan ahayn dhibaato halis ah marka la kordhinayo currants. Cayayaanka Yoshta waxaa inta badan ka muuqda noocyo kala duwan oo ah caarada iyo aphids, iyo sidoo kale dhogorta dhogorta iyo kiisaska miraha currant. Habka ugu fiican ee looga hortago cayayaanka waa cayayaanka "Akarin", "Agravertin", "Biotlin", "Detsis" iyo "Kleschevit". Si kastaba ha noqotee, si aad u ilaaliso warshadda ka soo horjeeda cayayaanka iyo cudurrada kala duwan, daaweynta diyaargarowga kor ku xusan waa in la fuliyaa ma aha oo keliya daaweynta yoshta, laakiin sidoo kale inay ka hortagaan. Ujeedadaas, guga (ka hor intaan ubbooyinku bilaabin in ubaxu ku boodo geed) iyo xilliga dayrta (ka dib marka dhirta uu baxo), yoshta waxaa lagu daaweeyaa xal hal-boqolkiiba oo ah dareeraha Bordeaux, sulphate copper ama xal toddoba boqolkiiba ah. Urea waa doorasho la doorbido daaweynta, taniyo marka laga reebo ilaalinta cayayaanka iyo cayayaanka, waxa kale oo ay fulisaa hawsha quudinta dhirta leh Bacriminta nitrogen. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtagal ah in la bilaabo buufinta kaliya marka heerkulka beerta uu gaaro +5 ºC.
Dhamaan burooyinka qori Yoshta
Inkasta oo yoshta aan u baahnayn manjooyin qaabeyn ah, weli waa inaad wajahdaa wajigan daryeelka xanaanada. Sidaa darteed, bilawga guga, geedaha nadaafadda ee geedaha waxaa la fuliyaa, taas oo ku lug leh ka saarista caleemaha jaban iyo kuwa buka, iyo sidoo kale yaraynta qaybo caafimaad qabta oo yaraa qaboobey xilliga qaboobaha. Intaa waxaa dheer, ka dib 7-8 sano, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caleemaha, tegaayo segments kaliya 6-8 ku hari on baadiyaha. Tallaabooyinka nadaafadda ayaa la yareeyey iyo xilliga dayrta yoshty. Sida ugu dhakhsaha badan ee ay duurka iyo geedaha u gudbaan muddada aamusnaan, bannaanka u gooyay caleemaha jabay, iyo sidoo kale qaybaha ay saameeyeen kiiska galaaska. Waxaa intaa dheer, laamood oo caafimaad qaba, kuwaas oo la gooyaa saddex meelood meel ka mid ah dhererkooda, waxay hoos u dhacayaan.
Sida loo faafiyo yoshtu
Sida currants, yoshta leedahay fursado badan ee faafinta daaqsinka, taas oo macnaheedu yahay in ninkii beerta oo idil uu dooran karo doorashada ugu haboon ee naftiisa. Maxay noqon doontaa (ujir, kala qaybinta baadiyaha ama beeritaanka warshad adigoo dhajinaya) - oo keliya waxaad go'aansataa, laakiin kiis kasta waa lagama maarmaan in la tixgeliyo qaddarinta qaab kasta.
Xulashada tani waxay la isticmaali karaa xilliga dayrta oo kaliya marka uu baadiyaha u baahan yahay in la beddelo. Xaaladdan, kicinta iyo dhirta dhirta ayaa bixisa tallaabooyinka soo socda: marka la qodayo baadiyaha, xididdadiisa waa la nadiifiyaa adeecidda ciidda waxaana loo qaybiyaa qaybo leh mindi ama sharooto. Mid kasta oo ka mid ah waa in ay sameeyaan xididada iyo dhowr caleemo xoog leh. Ujeedooyinka nadaafadda, goobaha jarjarada waxaa lagu daaweeyaa dhuxul la jajabiyey, ka dibna qaybaha la helay waxay ku fadhiisanayaan meelo hore loo diyaariyey. Xulashada territoriska iyo diyaarinta ciidda beeritaanka waxaa lagu sameeyaa iyada oo la raacayo sharciyadii hore loo soo sharaxay.
Yoshta isugeynta xilliga gu'ga waxay leedahay laba ikhtiyaar oo loogu talagalay hirgelinta: adoo isticmaalaya gooynta cagaaran ama qayb ka mid ah dhirta dhirta. Xaaladda dambe, caleemaha bislaaday ee da'doodu u dhaxayso laba ilaa afar sano ayaa loo doortaa wax soo iibsiga. Waxaa fiican in tani la sameeyo xilliga dayrta (qeybtii dambe ee Sebtembar), taniyo kiiskan, gooynta lagu beeray rooting waxay yeelan doontaa wakhti ay ku degaan oo badiyaan, sida caadiga ah, guga way wada koraan. Ka qaadashada qaybta dhalada ee matoorka ah ee caleemaha waa inay lahaataa 5-6 burooyinkeeda waxayna gaartaa 20 cm oo dherer ah.
Waa muhiim! Caarada jeexjeexan ee aan rasmiga ahayn ma'aha mid ku habboon xididka marka la isticmaalayo gooyn yar oo qoryo ah.
Qaybaha la helay ee yoshta waxaa lagu beeray ciidda la kariyay ee xagal ah 45 º, iyagoo haysanaya masaafada dheer ee 60-70 cm. Sida beerista caadiga ah, dhulka ku wareegsan seedling wax yar ayaa is dulfuulan, la waraabiyey iyo mulched peat. Sida for grafting cagaaran, kiiskan, on gardarrada, gooyn apical, kuwaas oo ah 10-15 cm dheer, waa ku fiican yahay.. Dhamaan caleemaha hoose ayaa laga saaraa iyaga, kuwa ugu sarreeya waxaa la gooyaa saddex meelood meel ka mid ah dhererka. Gooynta noocan oo kale ah ayaa lagu beeray dhul furan xagaaga (laga bilaabo Juun ilaa horraantii Sebtembar), laakiin beer-qabow qabow ayaa sidoo kale faa'iido leh. Gubashada iftiinka waxaa laga sameeyaa kiniin kasta oo ka mid ah gooynta, ka dib markii qaybaha hoose lagu meeleeyo xalka aasaasiga ah oo ay ku jiraan 12 saacadood. Wakhtigan ka dib, gooyn ayaa la soo saaray, biyo nadiif ah lagu maydhay oo lagu beeray aqal dhirta lagu dhisay oo isku dhow oo isku dhow oo isku dhejinaya 45 º. Hadda waxay ku sii jirtaa oo kaliya in ay ku shub geedo iyada oo shaandho ganaax iyo dabool leh dabool daahir ah. Inta u dhaxaysa geeska daboolka iyo gooynta naftooda, meel bannaan oo ah ugu yaraan 15-20 cm waa in la ilaaliyaa.
Marka ugu horreysa ka dib markaad ka soo degto daboolka lama dabooli karo. Hawo qabow iyo heerkul ah +20 ºC waa in lagu hayaa aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sida ugu dhakhsaha badan qiimahani wuxuu gaaraa +25 ºC, daboolka ayaa kor loogu qaaday hawo-qaadashada. Haddii dhammaan talooyinka la raaco, gooynta yoshta waxay yeelan doontaa xidid illaa 3-4 asbuuc, waxaana suurtogal ah in ay sii socoto habka hagaajinta iyadoo maalin walba laga saarayo daboolka korantada iyo kordhinta muddada hawo-qaadista. Sida ugu dhakhsaha badan gooyn ayaa si fiican loo xoojiyey - daboolka ayaa gabi ahaanba laga saaray. Waa in la ogaadaa in heerka badbaadinta ee caleemaha cagaaran ay aad uga sarreeyeen qaybaha semi-lignified ee caleemaha, sidaa daraadeed, isticmaalka habkan soo saaridda waa la doorbidaa.
Yoshta soo saarid by layering waxaa lagu fuliyaa guga hore, sida ugu dhakhsaha badan ciidda kulul yar. Si aad u ogaatid qorshahan, waxaad u baahan tahay inaad doorato caleemo sanadle ah ama biennial si fiican, loo dhigo grooves ku saabsan 10 cm qoto dheer diyaarshay hore ee ciidda la furfuray iyo dhejiyo leh joodar biraha. Dhalooyinka sare ee dhulka kor ku xusan waa la googooyaa oo ku rusheeyaa ciidda bacrin ah. Sida ugu dhakhsaha badan gooynta u muuqdaan caleemo leh height ah 10-12 cm, waa in la rusheeyaa dhulka leh kala bar. Ka dib laba ama seddex toddobaad kadib, dhagaxu wuxuu soo noqnoqonayaa isla dhererka, iyo dayrta (ama xitaa ka sii wanaagsan guga soo socda), gooynta xididada ayaa la kala soocaa oo lagu beeray meel joogto ah. Marka laga soo tago otvodkov horizontal, leh dhalashada ee yoshta sidoo kale waxay isticmaali kartaa arc ama qaababka toosan ee habkan.
Burburka buuxa ee yoshta berry wuxuu dhacaa gudaha 2-3 toddobaad gudahood, miisaanka mid kastana wuxuu u dhexeeyaa 3 ilaa 7 garaam. Marka la eego xaqiiqda ah in berry ay soo ururiyaan burushka wakhtiyada kala duwan, waxay u badan tahay in ay sii dheeraadaan on baadiyaha. Si kastaba ha noqotee, ha noqotee, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa, in goynta laga fuliyo bartamihii dhexe ilaa dhammaadka July, maadaama waqtigani yahay in yoshta ay gaarto qaangaarka nafleyda. Miraha geedaha waxaa loo isticmaalaa labadaba cusbo iyo ka dib marka lagu daro macaanka, cabitaannada miro, wax lagu kariyo, macaanka, jelly, macaanka, iwm. Iyada oo ku xiran xaaladaha cimilada iyo heerkulka Bisaylkiisa, berry yoshta wuxuu noqon karaa dhadhan macaan, macaan ama aad u macaan. Markuu go'aansaday inuu soo saaro yoshta kaadidaada, waxaad marka hore hubin doontaa in tani ay tahay warshad qaas ah oo isku dhafan dhammaan sifooyinka wanaagsan ee currants iyo gooseberries.